10ka bedel ee ugu wanaagsan Gmail | Androidsis
10ka badel ee Gmail
Aynu wajahno, mid raadso beddelka Gmail Ma sahlana, maadaama adeegga boostada ee Google uu yahay midka ugu wanaagsan, haddii uusan aheyn adeegga ugu wanaagsan ee emaylka ee aan hadda ka heli karno suuqa, gaar ahaan haddii aad ka faa'iideysato howlaha tirada badan ee ay bixiso.
Ma ogtahay in Gmail noo ogolaanayo tirtir fariin la soo diray? Ama taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan jadwal u dhigno dirista fariinta. Waxay u badan tahay inaadan aqoon shaqooyinkan inaadan adeegsan doonin, laakiin waa qaar ka mid ah howlaha ay Gmail na siiso oo laga heli karo adeegyo dhowr ah oo emayl ah sida Muuqaalka.
Markaad dooranayso adeegga kaydinta boosta, waa inaan tixgelinno dhowr arrimood oo taxane ah, tan ugu muhiimsani waa awoodda keydinta ee ay na siiso, gaar ahaan haddii waxqabadkeennu ku socdo kanaalkan isgaarsiintu uu aad u sarreeyo.
Dhinac kale oo ay tahay inaynu ku xisaabtano ayaa ah hadaad noo soo bandhigto codsi ku saabsan Android ama waxaan u isticmaali karnaa macaamiil emaylka dhinac saddexaad ah. Xaaladda dambe, tani nama oggolaan doonto inaan sida ugu badan uga faa'iideysanno taleefannadeenna casriga ah, maxaa yeelay dhammaan howlaha ay na siin karto barxadda lama heli doono.
3 Boostada Yandex
9 Koala hadda
Xulashada ugu badan ee la mid ah xagga sifooyinka aan ka heli karno waa Muuqaalka, adeegga iimaylka ee Microsoft, adeegga boostada hore loo yiqiin Hotmail iyo MSN, sidaa darteed haddii aad wali mid ka mid ah haysatid, waad ka faa'iideysan kartaa dhammaan howlaha ay na siiso.
Muuqaalka ayaa na siinaya qashinkeenna 15 GB oo kaydinta, booska kaliya loogu talagalay emayllada aan helno. Haddii intaas lagu sii daro, halkii aan ka sii wadi lahayn adeegsiga Google Drive, waxaan aadeynaa OneDrive, Microsoft waxay na siineysaa 5 GB oo ah meel wax lagu keydiyo.
Meeshani waa ka yar tahay 15 GB ee Google na siinayo, laakiin ugu yaraan, iskuma daro booska boosta, oo leh Sawirrada Google iyo keydinta sida Google u sameyso, sidaa darteed maahan inaan ka digtoonaano in xilliyo faaruq ah sanduuqayaga boostada oo aan raadineyno meel.
Mid ka mid ah qodobada wanaagsan ee Muuqaalka, gaar ahaan barnaamijka Android, waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan talo soo jeedinta bulshada adeegsaduhu soo jeedinayso. Xaqiiqdii, laga bilaabo arjiga laftiisa waxaan fursad u leenahay inaan u dirno talooyin ku saabsan hagaajinta qaabka shaqooyinka cusub ama wax ka beddelka kuwa jira.
Codsiga Android wuxuu noo ogolaanayaa inaan sida ugu badan uga helno arjiga, in kasta oo xulashooyinka in la tirtiro emayl la soo diray oo jadwal loo geeyo gaarsiinta ay Oulook na siineyso iyada oo loo marayo nooca webka, laguma heli karo barnaamijka Android.
Muuqaalka loogu talagalay Android sidoo kale wuu noo ogolaanayaa isku xir xisaabaadkayaga adeegga kaydinta ka duwan yahay OneDrive (Microsoft), oo noo oggolaanaya inaan ku darno xisaabaadka kaydinta Dropbox, Box iyo Google Drive inta badan.
Thanks to shaqeynta, waan awoodnaa Ku soo lifaaq faylasha adeegyadan boostada ah illaa emayl kasta oo aan ka dirayno arjiga, ama iyada oo loo marayo Muuqaalka, Gmail, Yahoo koontada ...
Haddii sababaha kugu qasbay inaad sameyso iyada oo aan lahayn Gmail ay tahay asturnaan, beddelka ah inaad ilaaliso xogtaada marwalba waa inaad isticmaasho Proton Mail. Boostada 'Proton Mail' ayaa sirta fariimaha dhammaadka-dhamaadka, si uusan qofna uga horjoogsan karin jidka, uusan u heli karin waxyaabaha ay ka kooban yihiin, oo ay ku jiraan lifaaqyada.
Codsiga Android wuxuu kaliya noo ogolaanayaa inaanu qaabeyno adeegan boostada ah. Ahaanshaha adeeg diirada saaray asturnaanta gabi ahaanba bilaash maaha, laakiin haddii aan haysanno ikhtiyaar aan ku isticmaalno nooca bilaashka ah ee xaddidan ugu sarreysa e-maylku yahay 500 MB.
ProtonMail - Email sir ah
Developer: Teknoolojiyada Proton AG
Waxaan sii wadnaa ka hadalka mid kale oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee internetka gacanta Yandex. Si aad noo siiso fikrad, Yandex oo ku taal Ruushka waa waxa Google ka jiro adduunka oo dhan. Kaliya maahan mashiin raadin, laakiin sidoo kale waxay ka dhigeysaa adeegyadeeda boostada loo yaqaan Yandex Mail, adeeg kaydinta iyo khariidaynta, oo ay heli karaan qof walba ...
Yandex wuxuu na siiyaa shaandheyn xoog leh oo loogu talagalay emaylka aan loo baahnayn iyo spam, sidaa darteed waxaan had iyo jeer lahaan doonnaa sanduuqa sanduuqaaga oo aan abaabulnaa oo nadiif nahay. Midka kaliya laakiin aan ka heli karno barnaamijka Android waa taas waxaa lagu heli karaa oo keliya IngiriisiSi kastaba ha noqotee, maahan sabab ku filan inaan la siinin isku day.
Codsiga Android ayaa noo ogolaanaya ku dar koonto emayl kasta laga helo adeegyo kale oo ay ka mid yihiin Gmail iyo Outlook, waxay ku habboon tahay habka mugdiga ah ee Android waxayna noo oggolaaneysaa inaan ku maamulno emayllada iyaga oo shaashadda ka dhex saaraya, sida codsiga Gmail iyo Muuqaalka ee Android.
Developer: Barnaamijyada Yandex
Yahoo waxay lahayd xilligeedii ammaanta horaantii 2000, markii ay ahayd mashiinka raadinta adduunka oo dhan laga isticmaalo. Si kastaba ha noqotee, imaatinka Google, oo leh gabi ahaanba nadiif nadiif ah, hoos u dhaca Yahoo ayaa bilaabmay.
Hoos udhacani waxaa laxukumay 5tii sano ee lasoo dhaafay, kaas oo waxaa soo gaadhay weeraro kala duwan oo xaday macluumaadka malaayiin isticmaale. Weeraradan ayaa ahaa kuwa kiciyay in shirkaddu ay sudho calaamadda Iibinta. Laga soo bilaabo 2018 waxay ahayd qayb ka mid ah hawlwadeenka Maraykanka ee Verizon.
Maaddaama Yahoo aysan waligood dhib ka qabin inay hagaajiyaan adeeggooda emailka, laakiin illaa maantadan la joogo, weli waa ikhtiyaar aad u fiican haddii baahiyahaagu yihiin kuwo aasaasi ah sida loo diro, loo helo emaylka iyo wax kale oo yar. Codsiga Android wuxuu kaloo noo ogolaanayaa inaan maamulno jadwalka, sida Outlook iyo Yandex.
Yahoo Mail: sanduuqa boostada
Hadaad rabto inaad talaabo horey usii qaado adiga u go'naanta deegaanka, xalka aan soo jeedineyno ayaa la yiraahdaa posteo. Posteo waa adeeg e-mayl oo lacag la bixiyo ah (€ 1 bishiiba) oo u adeegsada tamarta ku jirta adeegyadeeda Greenpace Energy, tamar laga helo ilo dib loo cusboonaysiin karo.
Waxay taageertaa borotokoolka IMPA iyo POP, sidaa darteed waxaan isticmaali karnaa macmiil kasta oo emayl ah si ay u helaan iyada oo aan wax dhibaato ah. Kuma jiraan nooc xayeysiis ah, xogtaada looma iibiyo dhinacyada saddexaad waxayna noo ogolaaneysaa inaan dirno lifaaqyo gaaraya illaa 50 MB.
Adeeggan, hadda, laguma heli karo Isbaanish iyo tirada shaqooyinku waa kuwa aasaasiga ah ee aan ka heli karno adeeg kasta oo boosteejo ah.
Haddii aad rabto inaad isticmaasho a koontada emaylka ee la xiriirta domain, xalka aad raadineyso waxaa lagahelaa Tutanota. Tutanota waa adeeg iimayl ah oo dhammaad-dhammaad ah oo sir ah oo codsigiisu yahay moobiil siinta il furan, sida kan loo isticmaalo bogga, si isticmaale kasta u hubiyo sida ay u shaqeyso iyo asturnaanta ay siiso dadka isticmaala.
Tutanota waxay noo ogolaaneysaa inaan abuurno domain gaar ah, kaliya 1 euro bishii, boostadayada oo lagu daro 1 GB kaydinta bilaashka ah. Codsiga qalabka mobilada ayaa kaliya la jaan qaadaya xisaabaadka emaylka ee adeeggan. Anaga oo aan adeegsanayn borotokoolka 'POP' ama 'IMAP', ma awoodi doonno inaan ku xirno gelitaanka adeeggan maareeyayaasha kale ee boostada sida Outlook ama Spark.
Tutanota: emayl ammaan ah
Xiiso leh beddelka Gmail, inkasta oo la bixiyay, waxaan ka helnay Zoho Mail, oo ah adeeg nooca ugu jaban uu leeyahay qiimo dhan 0.90 euro bishii oo leh 5 GB oo keyd ah, iyo 1,13 euro oo leh 10 GB oo keyd ah.
Waxay ku habboon tahay borotokoollada 'POP' iyo 'IMAP' si aan u adeegsan karno adeeggan la macaamil email kasta laga heli karaa Android, in kasta oo ay iyaduna leedahay codsi u gaar ah oo loogu talagalay Android.
Mid ka mid ah astaamaha ugu xiisaha badan ee adeegani waa inay noo oggolaato jooji dirista emayllada (sida Gmail iyo Outlook). Waxaa ka mid ah jadwalka isku dhafan barnaamijka iyo in aan sidoo kale ku dhex milmi karno kalandarka taleefannada casriga ah.
Waxay sidoo kale na siisaa marin aan khadka lahayn, aaladaha iskaashiga, maaraynta hawsha, qoraalo iyo calaamado waxayna noo ogolaaneysaa ku soo lifaaq faylasha illaa 250MB.
Zoho Mail - Email iyo Kalandar
Developer: Shirkadda Zoho
GMX waa mid ka mid ah adeegyada boostada ee na siiya shaqooyinka ugu badan, gaar ahaan nooca lacagta la bixiyo, maaddaama aan sidoo kale leenahay nooc bilaash ah, in kastoo ay aad u yaryihiin howlaha. Awoodda GMX waxaa laga helaa dhexgalka xafiiska, isdhexgalka taas oo noo ogolaaneysa inaan wax ka bedelno dukumiintiyada dalabka laftiisa isla markaana aan si toos ah ugu keydinno isbeddelada faylka.
Adeegan boostada ah wuxuu na siiyaa a awood leh app Android, oo aan si buuxda uga faa'iideysan karno howlaha ay na siiso. In kasta oo ay la jaan qaadi karto IMAP iyo POP, haddii aan adeegsanno codsiyada dhinac saddexaad, ma awoodi doonno inaan si buuxda uga faa'iideysanno.
Haddii aan sidoo kale raadinno a adeegga kaydinta Si loo buuxiyo maqnaanshaha Google Drive, waxaan ka faa'iideysan karnaa Cloud GMX, adeegga kaydinta daruuraha si aan ula shaqeyno faylalkayaga, ula wadaagno, ugala shaqeyno khadka tooska ah isticmaaleyaasha kale ...
GMX - Boostada & Daruurta
Koala hadda waxay ka timaadaa Switzerland waxayna na siisaa bedel aad u xiiso badan oo ah Gmail, halkaas oo aan kaliya marin u lahayn koontada emaylka iyada oo aan wax badan laga hayn, laakiin sida GMX, waxaan haysanaa adeegyo badan oo kala duwan sida tafatirayaasha faylka, kalandarrada, shaqooyinka, qoraalada, kuma jiraan xayeysiinta ... iyo sidoo kale adeegga wicitaanka fiidiyowga
Shirkaddu ma hayso wax diiwaan ah oo ku saabsan waxqabadkayaga ee ku saabsan server-keeda (oo lagu martigeliyey Switzerland), laakiin sidoo kale dhammaan softiweerrada la isticmaalo waa il furan, si aad u hubin karto, adigoo aqoonta saxda ah, sida adeegan boostadu u shaqeeyo.
Koala Hada xor maahaTaabadalkeed, waxay ina siisaa laba qorshe, farqiga kaliya ee laga helayo nooca ugu qaalisan (9 Swiss francs), waxay bixisaa taageero CalDAV iyo CardDAV, oo ah nooc ka jaban uusan bixin (5 Swiss franc).
Labada qorshe ku dar 5 GB oo keyd ahama, rukunka dhamaadka-ilaa-dhamaadka, marin u helka websaydhka, IMAP iyo taageerada SMTP (si loogu isticmaalo adeegga macaamiisha boosta) ...
Mailfence Waa bedel Yurub ah oo nooga yimaada Biljamka. Waxay bixisaa aqoonsi laba qodob iyo sir iyo waxaa ka mid ah taageerada IMAP iyo POP, laakiin kaliya noocyada la bixiyay. Nooca bilaashka ah kuma jiraan taageeradan, markaa ma awoodi doontid inaad ugu adeegsato dalabkaaga emaylka aad ugu jeceshahay taleefankaaga casriga ah, maaddaama Mailfence aysan soo bandhigin codsi ku saabsan Android
Nooca bilaashka ah wuxuu na siinayaa 500 MB oo keyd ah dukumiintiyada iyo 500 MB oo kale oo aan ku keydinno emaylka. Waxay isticmaashaa nidaam ah saxiixa digital si loo hubiyo in qofka warqadda helaya uu annaga na yahay sidaa darteed ma jirto hab lagu buuxiyo cinwaanka qofka soo diray.
Kuma jiraan nooc kasta oo xayeysiis ah (sidoo kale nooca bilaashka ah midna), waxay leedahay shaandhayn SPAM awood leh iyo raadraacyo ay ku jiraan inta badan emayllada xayeysiinta ee aan helno, kuwaas oo aad ku ogaan karto hadaan furnay boostada iyo inta aan aqrinay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 10ka badel ee Gmail
Signal: waa maxay, sida ay u shaqeyso iyo waxa ay na siiso si ka duwan WhatsApp iyo Telegram